Burma Partnership » Statement of Burma Health System Reform Seminar
By Health Convergence Core Group • March 30, 2016
More than ninety delegates from Burma’s ethnic health organizations, border-based community health organizations, medical professionals, academics, lawyers, women and youth organizations, education, environment, and other community-based organizations have heldaSeminar on “Health Reform towardsaDevolved Health System in Burma” from March 24 to 25 atalocation on the border.
The Seminar discussed policies and programs of ethnic health organizations, Burmese government’s health policy and programs as well as humanitarian work involved in the peace process being implemented by the government and ethnic armed groups.
In accordance with the changes in political development, the Seminar deliberated and decided on recommendations to the new government regarding reform in health policy and health system in addition to ethnic health organizations’ policies and positions as follows:
1. Promptly build genuine internal peace since wars and conflicts in the region bring aboutagrave health situation;
2. Increase budget for conflict-affected ethnic peoples and remote regions; Formulate and implement priority programs including development of human resources on physicians and health personnel in accordance with local needs;
3. A tripartite consultation of ethnic health organizations, Ministry of Health, and State and Regional Public Health Departments has to be initiated;
4. Support and assist health works of Non- profit private organizations, community-based organizations, ethnic health organizations and international organizations in order to achieve access to comprehensive healthcare for all;
5. Cooperate with community-based organizations and academics including local ethnic peoples for health and social impact analysis and monitoring of regional investment and development projects;
6. In formulating and implementing the national health system, cut down centralization and work towards devolving responsibility to various regional and local levels; Set sights on the principle of Federal Union structure;
7. Ethnic and community health organizations and their existing systems and structures must be formally recognized and maintained (authority and management) in their areas during the interim period of the peace process;
8. In reforming the national health policy and system in accordance with Burma’s political development, ethnic- and community-based health organizations and various civil societies should be allowed to participate in;
9. There must be increasing transparency and accountability in formulating and implementing health projects of central government and international health organizations;
10. Raise health expenditure from national income and foreign revenue; distribute this equitably by giving priority to marginalized people in conflict-affected regions;
11. If the central government, international organizations, or private bodies want to work in ethnic administrative areas, collaboration, and involvement of local health organizations must be obtained;
1. Dr. Cynthia Maung (+66 899615054)
2. Nai Lawe Aung (+95 9255948003)
3. Saw Nay Htoo (+66 811902217)
သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် မြန်မာဘာသာကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်သည်။
ရက်စွဲ – ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၀)ရက်
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ နယ်စပ်ဒေသအခြေစိုက်လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များ ၊ တတ်သိပညာရှင်များ ၊ အမျိုးသမီးနှင့်လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအ၀င် ပညာရေး ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ နှင့် အခြားသောလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်(၉၀)ဦးကျော် တက်ရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးစနစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (Health Reform towardsaDevolved Health System in Burma) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ (၂၄)ရက်မှ (၂၅)ရက်အထိ နယ်စပ်ဒေသတနေရာတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကျန်းမာ ရေး ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပြင် အစိုးရနှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပါ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနှင့်ပါတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။
ပြောင်းလဲလာသည့်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အညီ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်စနစ်တို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အစိုးရသစ်ထံသို့ တောင်းဆိုချက်များနှင့် တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာရပ်တည်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဆွေးနွေးချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
၁။ ဒေသတွင်း စစ်ပွဲနှင့်ပဋိပက္ခများသည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားမှုကိုဖြစ်စေသောကြောင့် စစ်မှန်သော ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်ပေးရန်။
၂။ ပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရသော တိုင်းရင်းသားလူထုများနှင့်ဝေးလံသီခေါင်သောဒေသများအတွက် ဘဏ္ဍာငွေ တိုးမြင့်ချမှတ်သုံးစွဲမှု၊ ဆရာဝန်နှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဝင်သော အထူးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် များကို ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်များနှင့်အညီ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
၃။တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများ ပါဝင်သော သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်ဖော်ဆောင်ပေးရန်။
၄။ လူတိုင်းအတွက် အလုံးစုံလွှမ်းခြုံသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်လှမ်းမီစေရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိက ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုများ ကို အားပေးမြှင့်တင် ပံ့ပိုးသွားရန်။
၅။ ဒေသအတွင်းရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဘဝလုံခြုံမှုအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင် မည့် အကြောင်းအချက်များကို ကြိုတင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း ၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းများကို ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ အပါအဝင် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ ၊ နည်းပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။
၆။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း ရေးဆွဲချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချပြီး ဒေသ ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်သို့ တာဝန်ခွဲဝေအုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်စေရမည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမှု မူအတိုင်း ဦးတည်စေရမည်။
၇။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်နေသည့် ကြားကာလနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသား ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုစနစ် (လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှု)ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီး အသိအမှတ်ပြုကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားစေရမည်ဖြစ်သည်။
၈။ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အညီ အမျိုးသားကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့်စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးဆွဲချမှတ်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားနှင့်လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုကဏ္ဍအသီးသီးမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် ရှိစေရမည်။
၉။ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု ရှိစေရမည်။
၁၀။ နိုင်ငံတော်အမျိုးသားဝင်ငွေနှင့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများမှ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်ပြီး ဆင်းရဲနိမ့်ကျပြီး ကျန်းမာရေး အခြေအနေလွန်စွာဆုိုးရွားနေသောဒေသများအတွက် ဦးစားပေးကာ မျှမျှတတ ခွဲဝေသုံးစွဲစေရမည်။
၁၁။ အစိုးရ ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းရင်းသားဒေသတွင်း အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသခံကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရယူရမည်။
၁။ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် (+၆၆၈၉၉၆၁၅၀၅၄)
၂။ နိုင်လဝီအောင် (+၉၅၉၂၅၅၉၄၈၀၀၃)
၃။ စောနေထူး (+၆၆၈၁၁၉၀၂၂၁၇)
Tags: ASEAN, Childeren, Ethnic Health, Ethnic Nationalities, Health Care, Health Convergence Core Group, Women